Manbarroo, Mojuulii fi Qaaqalee
Kanneen armaan gadii tajaajila guddaa manbarroo, mojuulii fi qaaqalee bu`uura LibreOffice keessattii ibsu.
Bu`uuri LibreOffice projektii caaseessuuf kamshaalee kennuu tajaajila. Deggarsa "units" adda addaa kan projektii bu`uuraa keessatti tokko tokkoo SUBS fi FUNCTIONS ramaduuf nu danddeesisan kenna.
Manbarroon akka kamshaatti mojuulii qindddeessuf, yookiin galmeetti yookiin qajojiitti miltoo ta`uuf gargaara. Yeroo galmeen yookiin qajojiin olkaa`amu, mojuuliin manbarroo keessatti qabaman ofumaan oltaa`u.
Manbarroon mojuulii hanga 16,000 qabaachuu ni danda`u.
Mojuuliin qaaqa hiika qaaqa, kan akk amaloota saaxinii qaaqa, amaloota tokko tokko maalimaa qaaqa fi mudatoota ramadaman ofkeessatti qabata.Mojuuliin qaaqa baaxxee qaaqa qofa ijaa qabaatuuf, takka takka "dialogs" jedhama.
Qindeessuu Manbarroo fi Mojuulii
Title is: Manbarroo, Mojuulii fi Qaaqalee